eHimalaya Online || News from nepal » आजको राशिफल ती निम्न राशिलाई अत्यन्तै लाभ तपाईको कस्तो रहला आजको दिन ?
आजको राशिफल ती निम्न राशिलाई अत्यन्तै लाभ तपाईको कस्तो रहला आजको दिन ?
२०७८ भदौ २९ गते मङ्गलबार ०१:२१
मेष:- कुनै एक वरिष्ठ व्यक्तिको मार्गदर्शन पाउनुहुनेछ। ब्यापार ब्यवसायमा नाफा बढ्नेछ। काममा शान्ति मिल्नेछ। सहकर्मीहरुको सहयोग प्राप्त हुनेछ। पैसा हुनेछ। पी,डा, ड,र र चिन्ताको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। बुद्धिमानीपूर्वक...
मेष:- कुनै एक वरिष्ठ व्यक्तिको मार्गदर्शन पाउनुहुनेछ। ब्यापार ब्यवसायमा नाफा बढ्नेछ। काममा शान्ति मिल्नेछ। सहकर्मीहरुको सहयोग प्राप्त हुनेछ। पैसा हुनेछ। पी,डा, ड,र र चिन्ताको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। बुद्धिमानीपूर्वक कार्य गर्नुहोस्। समस्या हट्नेछ। कानूनी बाधा हटाएर, स्थिति अनुकूल बन्नेछ।
वृष:- बहुमूल्य सामानहरु आफूसँगै राख्नुहोस्। शारीरिक कमजोरी रहनेछ। काम गर्न मन लाग्दैन। कसैको आफ्नै व्यवहार प्रतिकूल हुनेछ। साझेदारहरु संग मतभेद हुन सक्छ। जागिर मायदि अपेक्षित रूपमा काम सम्पन्न भएन भने, अधिकारीले असन्तुष्टि सामना गर्नुपर्नेछ। सवारी साधन र मेसिनरी को उपयोग मा सावधान रहनुहोस्।
मिथुन:- बहुमूल्य सामानहरु आफूसँगै राख्नुहोस्। नयाँ योजना बन्नेछ। कार्य प्रणालीमा सुधार हुनेछ। व्यापारमा नयाँ अनुबंध हुन सक्छ, प्रयास गर्नुहोस्। आम्दानी बढ्नेछ। तपाइँ सामाजिक कार्य गर्न को लागी प्रेरणा पाउनुहुनेछ। घर बाहिर सोधपुछ हुनेछ। रोजगारी बढ्नेछ। प्रलोभनमा नपरौ तपाइँ आरामको समय पाउनुहुनेछ। त्यहाँ आशंका र शंका हुनेछ।
कर्कट:- प्रेम सम्बन्ध मा अनुकूलता रहनेछ। तपाइँ शुभ समाचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। व्यापार यात्रा लाभदायक रहनेछ। तपाइँ साथीहरुलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। सम्मान पाउनुहुनेछ। आम्दानी बढ्नेछ। शारीरिक पी,डा सम्भव छ। त्यहाँ अज्ञात को ड,र हुनेछ। लेनदेनमा सावधान रहनुहोला। चिन्ता हुनेछ। बकाया बरामद गर्ने प्रयास सफल
सिंह:- ब्यापारमा राम्रो हुनेछ। शत्रुहरु शान्त रहनेछन्। धनमा खर्च हुनेछ। अप्रत्याशित खर्चहरु आउनेछन्। तपाइँ एक ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ। पुरानो रोग फेरी बिग्रन सक्छ। आफ्नो बोलीलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। कुनै अपरिचित व्यक्तिमा अन्धविश्वास नराख्नुहोस्। चिन्ता र तनाव रहनेछ। अपेक्षित काममा ढिलाइ हुनेछ।
कन्या:- धार्मिक कार्यक्रमको आयोजना गर्न सकिनेछ। पूजामा रुचि बढ्नेछ। लाभको अवसर आउनेछ। सुख हुनेछ। यात्राले अनुकूल लाभ दिनेछ। त्यहाँ रोयल्टी हुनेछ। हतार र तर्क बाट बच्नुहोस्। तपाइँ थकित महसुस गर्नुहुनेछ। कसैको ब्यवहारले आत्मसम्मानमा ठेस पुग्न सक्छ। अदालत र सरकारी काम अनुकूल रहनेछ।
तुला:- शेयर बजारमा बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्नुहोस्। कुनै हतार नगर्नुहोस् । समय अनुकूल रहेको छ। यात्रा सुखद रहनेछ। कुनै शुभ कार्यक्रम मा भाग लिने अवसर मिल्नेछ। बिद्यार्थी वर्गलाई सफलता मिल्नेछ। स्वादिष्ट खानाको आनन्द लिनुहोस्। ब्यापार ब्यवसायमा अनुकूल लाभ हुनेछ।
वृश्चिक:- व्यर्थमा दौड हुनेछ। समय बर्बाद हुनेछ। दु:खद खबर टाढा बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। विवादले समस्या ल्याउनेछ। काम गर्न मन लाग्दैन। लेनदेन हतार नगर्नुहोस्। त्यहाँ एक विशेष व्यक्ति संग सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। ब्यापार राम्रो हुनेछ। आम्दानीमा निश्चितता रहनेछ।
धनु:- बहुमूल्य सामानहरु आफूसँगै राख्नुहोस्। शारीरिक पी,डा सम्भव छ। परिवारको कुनै सदस्यको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता हुनेछ। केहि नगर्नुहोस् कि तपाइँ तल देख्नुहुन्छ। आर्थिक उन्नतिको प्रयास सफल हुनेछ। तपाइँ साथीहरुलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। शक्ति र प्रतिष्ठा बढ्नेछ। पैसा हुनेछ।
मकर:- भाग्यले साथ दिनेछ। काममा अनुकूलता रहनेछ। सुख हुनेछ। बुद्धि हावी हुनेछ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस्। विवाद बाट टाढा रहनुहोस्। बेमेल बाट बच्नुहोस्। जग्गा र भवन सम्बन्धी बाधाहरु हट्नेछन्। ठूला सौदाहरूले ठूलो नाफा दिन सक्छन्। आम्दानी बढ्नेछ। तपाइँ परीक्षा र साक्षात्कार आदि मा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। लगानी राम्रो हुनेछ।
कुम्भ:- व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहनेछ। अप्रत्याशित लाभ हुन सक्छ। लगानी राम्रो हुनेछ। ब्यापार बृद्धि हुने सम्भावना छ। कुनै पनि ठूलो समस्या को समाधान प्राप्त हुनेछ। सुख हुनेछ। अरुको काममा हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। पदोन्नतिको प्रयास सफल हुनेछ। रोजगारी पाउन सजिलो हुनेछ।
मीन:- टाढा बाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। आत्मविश्वास बढ्नेछ। प्रतिष्ठित पाहुनाहरु घरमा आउन सक्छन्। खर्च हुनेछ। जोखिम उठाउने साहस छ। आम्दानी जारी रहनेछ। दुष्ट मानिसहरु बाट टाढा रहनुहोस्। चिन्ता र तनाव रहनेछ। शत्रुहरु शान्त रहनेछन्। आफ्नो बोलीलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्।
प्रकाशित मिति २०७८ भदौ २९ गते मङ्गलबार ०१:२१
सामन्था-नागाको १० करोडको विवाह ४ वर्षसम्म पनि टिक्न सकेन, अब नागार्जुनले बुहारीलाई पाँच गुणा बढी तिर्नेछन् ।